Iindaba-Njani malunga neekangatsi zekhenyu
Abahlobo abaninzi abasebenza kwicandelo lezinto ezisetyenziswayo zonyango bayandibuza, siphi isizathu sokuba i-Kangyuan's catheters inegama elihle kwaye ingathengiswa kakuhle eYurophu, eMelika, eMzantsi-mpuma Asia nakwamanye amazwe amaninzi? Makhe sithethe ngayo namhlanje.
Okokuqala, izinto zokwenza imveliso
Tube I-Kangyuan's urathe catheter ityhubhu yenziwe nge-100% engenasicwecwe engenisiweyo yezixhobo ezomeleleyo, ezine-inertia egqwesileyo yomzimba, engenancasa, engenabungozi, engonakalisiyo, i-anticoagulant, antioxidant, biocompatibility, kwaye inokumelana nokubulala iintsholongwane kunye neemeko zokubulala iintsholongwane, kwaye Ukuhlangabezana neemfuno zebanga lezonyango.
Ngombandela we-silicone engamanzi exutywe ngeplatinam, iifaneli zinokucaca okuhle kunye nozinzo, ayizukufumana tyheli ngaphambi komhla wokuphelelwa.
Lo Ibhaluni ngumngundo ocinezelwe nge-silicone eqinileyo eqinileyo eyenziwe ngeplatinam, enobushushu obuphantsi kunye nexesha elide. Iimpawu zezinto zebhaluni zandisiwe. Ukunyaniseka okuhle kunye nokurhoxiswa kuqinisekisa ukuthembeka komgangatho webhaluni, kwaye umphezulu webhaluni ugudile emva kokurhoxiswa.
Intloko yesikhokelo se-Kangyuan's urinary catheters yenziwa ngejeli yesiliculisi engamanzi, equlathe i-barium sulfate engeyiyo ityhefu, enokufotwa nge-X-ray kwi-vivo ukuchonga ubunzulu bokufakwa komzimba wecatheter.
Okwesibini, iinkqubo zemveliso
I-catheter nganye ye-Kangyuan ye-urine catheter kufuneka ihambe ngeendlela ezininzi kunye nokuhlolwa kweencwadi ezine, kubandakanya i-silicone yokuxuba izinto ezingafunekiyo, i-extrusion, i-vulcanization, ukubumba i-funnels, uhlolo lwe-funnels, ukuvula umngxunya kumbhobho wokufaka ibhaluni, ukubumba ibhaluni, Ukuhlolwa kwebhaluni, ukutywinwa kwebhaluni, ukudityaniswa okungagungqiyo kwencam kunye netyhubhu, isikhokelo senqaku, ukushicilela, ukugrumba umngxunya wokuhambisa amanzi, uhlolo oluphakathi, ukucoca, ukomisa, ukupakisha kunye nokuzala. Itekhnoloji egqibeleleyo kunye neyodwa kunye namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda omeleyo amisela umgangatho ogqwesileyo. Kwaye kunciphise kakhulu iintlungu ezibangelwa kukufaka i-catheter, ukunciphisa ukubakho kosulelo lomnqamlezo womchamo, kunye nokuphucula ukwamkelwa kwezigulana. Abantu baseKangyuan baphatha inkqubo nganye ngesimo sengqondo esingqongqo, kulungile kuzo zonke iinkcukacha, kwaye bazabalazela ukufezekisa olona mgangatho uphezulu wecatheter nganye yokuchama.
Okwesithathu, iintlobo zeekati zokuchama
I-2 indlela ejikeleze i-catheter ye-silicone foley catheter yabantwana kunye nabantu abadala, indlela eyi-3 ejikeleze i-catheter ye-foley ye-foley yabantu abadala, i-2 indlela ejikeleziweyo kunye ne-croter ye-silicone foley catheter yabantu abadala, i-3 indlela ejikeleziweyo kunye ne-croter ye-silicone foley catheter yabantu abadala, 2 indlela tiemann abicah foley catheter yabantwana kunye nabantu abadala, 3 indlela tiemann tipped abicah foley catheter kubantu abadala, 2 indlela evulekileyo tipped abicah catheter foley abantwana kunye nabantu abadala, 2 indlela abicah catheter foley kunye ibhaluni ezihlanganisiweyo abantwana kunye nabantu abadala, 2 indlela abicah foley catheter enobushushu uphando kubantwana nakubantu abadala.